यो २०२2024 पेरिस ओलम्पिकको लोगो हो क्रिएटिव अनलाइन
पेरिसमा अर्को २०२ Olymp ओलम्पिकको ओलम्पिक ज्वाला हुनसक्छ लोगो खेलमा बढि ब्रेकि important भएको छ।
ओलम्पिकका लागि प्रदर्शन गरिएको लोगोमा लगभग years बर्षमायसको डिजाइनमा ज्वालाको प्रयोगले आलोचना र उपहासको लागि नेटवर्कको नेटवर्कबाट उत्र्नको लागि निकै ठाउँ छोडेको छ।
लगभग जस्तै जस्तै, के यो ब्यूटी सैलुन हो? गर्भ निरोधका लागि विज्ञापन? र त्यसैले रमाईलो घटनाहरूका साथ ट्वीटहरू वर्षा हुन थालेका छन्। र यो सत्य हो कि यदि तपाईं फ्लेम लोगोमा हेर्नुहुन्छ, तपाईं ओठहरू पाउन सक्नुहुन्छ, धेरै फ्रान्सेली कपाल; यसको मतलब यो होइन कि यो पेरिसको राजधानीको लागि फर्मको इरादा थियो, तर तिनीहरू बितिसकेका छन्।
Le लोगो des Jeux ओलम्पिक? को # पेरिस २०२। là हो! pic.twitter.com/092gZjExL0
- फ्रान्स टिभी खेलकुद (@frantvsport) अक्टोबर 21, 2019
यो सुनको डिजाइन "आर्ट डेको" को बारेमा हो र पेरिस अन्तिम पटक ओलम्पिकको लागि ठाउँ थियो जब को शैली। हामी सन् १ 1924 २XNUMX को कुरा गर्छौं र तपाईं अलि बढी बुझ्न सक्नुहुनेछ कि यो किन नमिल्दो शैलीमा फर्किन्छ।
सिम्पसनले लोगोको भविष्यवाणी गर्दछ # पेरिस २०२। pic.twitter.com/0KI20XcQ0W
- सिम्पसनो (@ सिम्पसनो एमएक्स) अक्टोबर 22, 2019
लोगो विज्ञापन को एक विवरण पहिलो पटक हो यो दुबै ओलम्पिक र प्यारालम्पिक सेवा गर्दछ। लोगो वेबसाइटले शब्दहरू प्रयोग गर्दछ एउटै प्रोजेक्टको दुई भागहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्न, एकल प्रतीकको प्रतीक हो र समान विचार साझा गर्दै कि खेल जीवन परिवर्तन गर्दछ।
लोगो रिट्वीज सबै ठाउँमा गएका छन्। हामीसँग पनि छ टिन्डरको ज्वाला को समानताहरु, लोकप्रिय डेटि app अनुप्रयोग। वा कसरी ज्वाला लगभग लिसा सिम्पसनले लगाएको कपालको जस्तो देखिन्छ। त्यो हो, त्यहाँ धेरै तुलनाहरू छन् र हामीलाई थाहा छैन कि तपाईं वास्तवमै के खोज्न चाहानुहुन्छ कि यो हो। कि २०२2024 पेरिस ओलम्पिकको लागि नयाँ लोगो द्रुत रूपमा फैलियो; हामी बिर्सदैनौं टोक्यो २०२० लोगोको साथ सबै भयो.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » धेरै » गिल्लाको केन्द्रमा पेरिसमा २०२ Paris ओलम्पिकको नयाँ लोगो